Iyi Apple Tambo tambo ndeye vamhanyi | Ndinobva mac
Iyi Apple Tambo tambo ndeye vamhanyi
Iyo Apple Watch chishandiso chakazvarwa nepfungwa yekuti vashandisi vayo havafanirwe kugara vachitarisa iyo iPhone. Nekufamba kwenguva inotoshandiswa kuongorora mutinhimira wemoyo. Rimwe remabasa arikushandiswa zvakanyanya kuve newachi yeiyo metrics of vamhanyi. Zvisinei, chimwe chezvipingamupinyi zvikuru kugona kuona iyo data pachiratidziro iri pakati peiyo nhangemutange.
Vanomhanya ikozvino vane tambo yakakodzera yekurovedza muviri nyore uye kuona data paApple Watch
Iyo Apple Watch inoshanda chaizvo kune vamhanyi vasingade zviyero zvakawandisa kana zvasvika pakuita maekisesaizi. Asi imwe yezvikanganiso zvainazvo ndeiyi kuverenga iyo data kuburikidza neyako skrini, kunyanya kupomba uye kumhanya. Asi iyo EdgeGear kambani yakagadzira tambo inogadzirisa izvi zvakasarudzika.
Wachi inochengeta padhuze nepasi pechigumwe, kwete pakati pewrist. Nenzira iyi tinodzivisa kuva pane kusimudza ruoko rwako nekukotamisa kumeso ako. Kunyangwe ichi chisiri chinhu chinonetesa, kana iwe uchitakura makiromita mazhinji, chero chiito chekuwedzera isimba chairo.
Iyo tambo inogadzirwa neyezvinhu zvakafanana neyemitambo Apple Watch uye simbi zvikamu zvakagadzirwa nefa-yakakandwa zinc. Tambo yacho inochinjirwa pachiuno uye wachi yacho inogadziriswa pazasi pechigunwe, ichiongorora kurova kwemoyo kuburikidza neboka repashure remhasuru. Nenzira iyi inogara yakanongedzwa kumeso uye zviri nyore kuverenga iyo data yeiyo wachi. Iyi sarudzo nyowani ndeyechokwadi mabhandi maviri. Zvechiwoko icho chinogadziriswa uye mweya uye imwe yechigumwe. Iyo yekupedzisira inouya mumatanho maviri kuti akwane vese vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyi Apple Tambo tambo ndeye vamhanyi
Unoziva here kuti zvingave zvakanaka?
Chinongedzo chetambo, kana kuisa zita racho kuti tikwanise kuritsvaga mugoogle ...
Ini ndaifanira kuiverenga ka2 kuti nditsvage zita remugadziri uye ndikwanise kudhonza kubva ipapo ...
Pindura kune Dwarf
Mafolda anosvika paTeregiramu yeMac
Ngoro paApple TV + yepfupi inofanirwa kutepfenyurwa kupemberera Zuva rePasi